Chaiyo iPhone 7 inoshandura yakaburitswa ... izvo ndezvenhema | IPhone nhau
Mifananidzo yekutanga yeiyo iPhone 7 yakasvinwa ... izvo manyepo
Tiri muna Chivabvu, isingasviki mwedzi mina pamberi pekuburitswa zviri pamutemo kweiyo iPhone 7, uye isu tese tinotarisira kuti tinowana ruzivo nezve inotevera smartphone pane block. Kune ese mablog ari munyika tinoda kupa ruzivo rwuzere nezve iyo iPhone, kunyanya kune blog ine zita senge Actualidad iPhone, asi isu tinofanirwa kutarisa zvese zvatinoburitsa ka100 kuitira kuti tirege kuwana izvo zvazvino zvichangoburwa izvo atumira GSMArena.
Sezvauri kuona mumifananidzo, iyo svikiro inotitaridza iyo iPhone nyowani iyo inofanirwa kunge iri iyo iPhone 7. Iyo mahenda akanaka kwazvo uye anoratidza zvakadzama zvakadzama inotevera 4.7-inch iPhone iyo inofanirwa kuunzwa munaGunyana. Dambudziko nechinhu chinotaridzika zvakanakisa ndechekuti zvikanganiso zvinogoneka zvicharatidzawo. OnLeaks, kubva kuimwe nhoroondo yake yeTwitter, ndiye ndiye akaburitsa mufananidzo wekare uchiratidza kukundikana kwakange kwaregeredzwa neGSMArena.
Kwete, iyi haigone kuve iPhone 7
Iyo iPhone iri mumifananidzo ine mitsara yeantena kumucheto, chaiko. Haina chiteshi chefoni, kurudyi. Iyo ine yakakura kamera yakawanda kumucheto, chaiko. Iwe une vaviri vatauri, kurudyi kana zvisizvo? Zvinoenderana neshanduro dzakaburitswa svondo rapfuura, pachave nemutauri mumwe chete, saka isu tatova nebug yekutanga. Chero zvazvingaitika, sezvo pasina chakasimbiswa, isu tinosiya mukana wekusahadzika kumutauri wechipiri.
Mutauri weiyo iPhone 6s ane maburi matanhatu chete, zvakafanana neiyo iPhone 6 ichave nayo
Dambudziko nderekuti iyo 4.7-inch iPhone yakadzika zvishoma pane iyo 5.5-inch iPhone. Kuve wakadzikira, sekuratidzwa neOnLeaks, kune maburi maviri mashoma kune mutauri (kana mutauri) mutauri, saka izvo izvo mifananidzo iyo GMSArena yatipa isu chete inotiratidza i iPhone 7 ine zvese kubva ku4.7-inch modhi, asi ne vatauri veiyo iPhone 7 Plus / Pro. Tichafanira kuramba takamirira kuti tione iPhone 7.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Mifananidzo yekutanga yeiyo iPhone 7 yakasvinwa ... izvo manyepo
Tichafanira kuramba takamirira kuti tione kuti iyo iPhone 7 ichave iri sei chaizvo.
Android Wear 2.0 inotora femero kubva kuWatchOS yezvinhu zvitsva